एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक रू. २ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री | आर्थिक अभियान
एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक रू. २ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
वैशाख २६, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार बजार खुलेको डेढ घण्टाको अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
उक्त अवधिसम्ममा कारोबारमा आएका २११ ओटा धितोपत्रमध्ये एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक अर्थात् रू. २ करोड १ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.७७१ दशमलव २० मा कारोबार भइरहेको छ ।
यो शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ७ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेप्से १४ दशमलव ११ अंक बढेर हजार २७० दशमलव ६८ विन्दुमा पुगेको छ । उक्त अवधिसम्ममा कुल रू.४५ करोड ४४ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।